कक्षा ९ की छात्रा बेपत्ता, मामामाथि अपहरण आरोप | नुवागी
कक्षा ९ की छात्रा बेपत्ता, मामामाथि अपहरण आरोप
भक्तपुर । कक्षा ९ की एक विद्यार्थी एकहप्तादेखि बेपत्ता भएकी छन् ।
सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं. ८ सिपाडोलका स्थानीय माधव थापाकी १८ वर्षीया छोरी उषा कार्तिक ५ गतेदेखि हराएको महानगरीय प्रहरी वृत्त जगातीले जनाएको छ ।
सो दिन घरमा कोही नभएको बेला चिठ्ठी नै लेखेर हराएको प्रहरीले जनाएको छ । शान्ति निकेतन माध्यमिक विद्यालयका प्रअ पाण्डवराज अधिकारीले विद्यार्थी उषा नर्सरीदेखि नै सोही विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेकी विद्यार्थी भएको जानकारी दिए ।
‘दशैं बिदामा हराएको कुरा सुनेँ, निक्कै नरमाइलो लाग्यो, के भएको हो ? सत्यतथ्य पत्ता लगाउनु आवश्यक छ ।’ प्रअ अधिकारीले भने ।
हराइरहेकी उषाका बुवा थापाले प्रहरी वृत्त जगातीमा छोरी खोजिदिन आग्रह गर्दै आफ्नो साला नाता पर्ने भक्तपुरकै चाँगुनारायण नगरपालिका ९ ताथलीका ईश्वर खड्काले छोरी उषालाई अपहरण गरेको भन्दै वृत्तमा किटानी जाहेरीसमेत दिए पनि अहिलेसम्म कुनै अत्तोपत्तो नलागेको बताए ।
उषाका बुवाले दिएको किटानी जाहेरीको आधारमा वृत्तले खड्कालाई हिरासतमा राखे पनि सत्यतथ्य फेल नपर्दा अझ दुखि भएको उनको भनाइ छ । ‘छोरी हराएको भोलिपल्टै जानकारी दिँदा पनि छोरीको अवस्था थाहा भएको छैन ।’
प्रहरी हिरासतमा रहेका खड्का भने सत्तारुढ नेकपाका स्थानीय नेता र तत्कालीन एमालेको खेलकुद महासंघको भक्तपुर सचिवसमेत हुन् । त्यस्तै उनी नेपाल रेडक्रस सोसाइटी ताथली उपशाखाका सभापति पनि रहेका छन्।
उनलाई जिल्ला अदालत भक्तपुरबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिरहेको वृत्तका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक शिशु शर्माले जानकारी दिए।
उषा र खड्काबीच फेसबुक मेसेन्जरमा कुराकानी भएको आधारमा प्रहरीले खड्कामाथि अपहरण नभई साइबर क्राइमअन्तर्गत मुद्दा चलाएको उनले बताए ।
फेसबुक मेसेन्जरको च्याटिङमा नाताले मामा भाञ्जी भए पनि अश्लीलभन्दा पनि अश्लील शब्द प्रयोग अन्तरंग कुराकानी भएको पाइएको प्रनाउ शर्माले बताए ।
उक्त च्याटिङमा खड्काले उषालाई पटकपटक पैसा दिएको, मोबाइल रिचार्ज गर्न पिन नम्बर पठाएकोसमेत उल्लेख रहेको वृत्तले जनाएको छ।
उषाका बुबा माधवले उक्त च्याटिङको आधारमै खड्काले नै आफ्नो छोरी अपहरण गराएको आरोप लगाएका छन्। उनले आफू भक्तपुरमै बसेर उषालाई अरु केटा लगाएर अपहरण गराएको दाबी गरे।
‘ईश्वर खड्काले नै मेरी उषालाई अपहरण गराएको हाम्रो आशंका छ’, बुबा थापाले भने, ‘नत्र हराएको एक हप्ता हुँदा पनि छोरी किन फेला परिनन्।’प्रहरीले भने उनको आरोप स्वीकार गर्न सकेको छैन । प्रहरीले उषा हराएपछि उनको कोठामा खानतलासी गर्दा दुई फरकफरक चिठ्ठी बरामद गरेको छ । उक्त चिट्ठीमा मामा (ईश्वर खड्का) को कुनै दोष छैन भनी लेखिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक शर्माले जानकारी दिए।
उनले आफूले प्रयोग गर्दै आएको मोबाइलसमेत घरमै छाडेकी थिइन् । घरमा छोडेको मोबाइलको फेसबुक अकाउन्ट खोल्ने क्रममा मामा नाता पर्ने ईश्वर खड्कासँग मेसेन्जरमा भएको च्याटिङ सार्वजनिक भएको हो। सोही च्याटिङको आधारमा खड्कालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । खड्काले पनि उषा हराएकोबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएको प्रहरीले जनाएको छ ।
सङ्घर्ष : पढाइका लागि (फोटो फिचर)
शिक्षामन्त्रीको असन्तुष्टि सम्बोधन हुने, साविकको जिशिका अब प्रदेश मातहत आउने